Puntland oo Masuuliyiinta Dowladda Federaalka ka mamnuucday deegaannadeeda – Kalfadhi
Dowlad Goboleedka Puntland ayaa ka mamnuucay Dowladda Federaalka ah in ay masuuliyiinteedu tagaan Gobolka Nugaal, gaar ahaan magaalo madaxdiisa Garoowe, oo ah Xarunta Puntland. Puntland waxaa warqad uu ku saxiixan yahay Wasiirkeeda Amniga, Axmed Cabdullaahi Yuusuf, ay ku sheegtay ineysan Nugaal tagi karin shaqaale Dowladda Federaalka ka tirsan, laga soo bilaabo Wasiir, Ciidan ilaa Agaasime.
Waxay kaloo ka mamnuucday Gobolkaas in la geeyo ciidan aan ahayn kan hadda jooga, gaar ahaan ciidan ka socda Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) iyo dhamaan wax kasta oo la xiriira agab ciidan, sida hub iwm.
Kulan ay shalay ku yeesheen Garoowe Guddiga Amniga Puntland ayaa laga soo saaray go’aannadaas iyo kuwa kale, oo uu ka mid yahay inuusan,waqtiga doorashada askari aan ahayn kan shaqada ku jira la dhex mari karin Garoowe hub. Kulankaas kadib, waxa ay Puntland sheegtay in ay la wareegi doonto haddii lacag la soo galiyo deegaannadeeda, iyadoo diyaaradaha rakaabka la amray iney maamulka la soo wadaagaan magacyada iyo tirada dadka ay keenayaan Puntland inta ay socoto doorashada.
Soo xareynta Xildhibaannada dooranaya Madaxweynaha Putuland ayaa weli socota, iyadoo la filayo in 30-ka bishan la soo gaba-gabeeyo hawshaas. Markaas kadib waxa uu Guddiga Ansixinta iyo Xallinta Khilaafaadka Golaha Wakiillada Puntland ku dhawaaqi doonaa 66-ka Xubnood ee uu ka kooban yahay Baarlamaanka Puntland.
Inta la og yahay, illaa 30 Musharax oo uu ku jiro Madaxweyne Cabdiweli Gaas ayaa u taagan tartanka loogu jiro Doorashada Madaxweynaha Puntaland, oo la qorsheynayo in ay qabsoonto 8-da bisha soo socota ee Janaayo, 2019-ka. Waxaa ka hartay 10 maalin oo kaliya.